Eyona oyile ye-CBD yeNtlungu: Iimpawu ezi-3 eziPhezulu ze-2021 - Ezintsha
Eyona Ezintsha Eyona oyile ye-CBD yeNtlungu: Isikhokelo sokuZinakekela sokugqibela (uHlaziyo luka-2021)
Eyona oyile ye-CBD yeNtlungu: Isikhokelo sokuZinakekela sokugqibela (uHlaziyo luka-2021)
Uyikhetha njani ioyile efanelekileyo ye-CBD yokunciphisa iintlungu?I-CBD yasebukhosini
Ukufumana eyona oyile ye-CBD yeentlungu kunokuthatha ixesha, ungasathethi ke ngemali kunye nokusebenza nzima okubandakanyekileyo kulingo-kunye nempazamo yakudala. Ukuba ufuna ukugcina zombini ixesha kunye nemali ukuthenga Ioyile ye-CBD , ungawasebenzisa amava ethu kwaye ugqithisele oovimba bolwazi kwenye yezi zinto zintathu zisicebisayo.
Iimveliso ezi-4 eziPhezulu zeoyile ze-CBD zokuPhucula iintlungu
Ioyile ye-CBD inokuyiphucula kakhulu impilo yakho ukuba nje usebenzisa imveliso elungileyo.Nokuba ujongene nentlungu, ixhala , okanye ukungalali , umgangatho ubaluleke kakhulu kumava akho.
Kodwa ukhetha njani ioyile efanelekileyo ye-CBD yokunciphisa iintlungu?
Siza kukugubungela kamva kwinqaku, kodwa okokuqala, makhe sikwazise kwezinye zeoyile ze-CBD ezilungileyo esakha sazama. Nganye yezi mveliso ziqwalaselwe ngononophelo ukuqinisekisa ukuba ufumana eyona oyile ye-CBD ilungileyo kuhlobo lwakho lwentlungu.
1. I-CBD yasebukhosini : Eyona ndawo intle ngokupheleleyo ye-CBD yeoyile
I-CBD yasebukhosini.I-CBD yasebukhosini
I-CBD yasebukhosini i-oyile yenziwe ngezinto zemvelo. Inkampani isebenzisa izityalo ze-hemp zezinto eziphilayo kunye nokutsalwa okungaphezulu kweemveliso zayo, okukhokelela kwizicatshulwa ezinyulu nezinamandla.
Nokuba ukupakishwa kwayo kuqhutywa ngendlela ezinzileyo, ke ukuba uyakuxabisa ukuthenga abathengi ngokuziphatha, iRoyal CBD kufuneka ibe phezulu kuluhlu lwakho.
Xa kuziwa kumgangatho weoyile yeRoyal CBD, ipremiyamu yeyona ndlela ichazayo.
Ioyile inqunyanyisiwe kwioyile ye-MCT ye-organic yokuphucula ukufakwa kunye nezinye izibonelelo zentliziyo kunye nengqondo evela kwioyile yeoyile ebalulekileyo.
Ioyile yeRoyal CBD iyafumaneka kumandla amane: 250 mg, 500 mg, 1000 mg kunye 2500 mg. Unokukhetha phakathi kweencasa zendalo, zesitrus kunye ne-mint.
Esi sisicatshulwa esipheleleyo, ke ufumana lonke uluhlu lwee-cannabinoids ezingezizo ezengqondo, kunye namanqanaba okulandelela i-THC (ngezantsi kwe-0.3%), terpenes kunye nezinye izinto ezivela kwi-hemp.
Mbini. Inyosi yeGolide -Ioyile yeOrganic yeoyile yeOrganic
Ngokufana neRoyal CBD, inyosi yeGolide igxile kwioyile epheleleyo ye-CBD kuzo zonke izithako eziphilayo. Inkampani idibanisa ii-superfoods ezimbini: izityalo ezityebileyo ze-CBD ezivela eColorado kunye nobusi bezinto eziphilayo obuvela kwihlathi laseBrazil. Ioyile yegolide ye-Gold Bee yimveliso egcweleyo, ke ufumana iziphumo zokunxibelelana kwazo zonke ii-cannabinoids kunye ne-terpenes ezivela kwisityalo sokuqala. Ubuninzi bobuchule apha yi-1200 mg, eguqulela kwi-40 mg kwimililitha nganye.
Izicatshulwa ezipheleleyo ezibonakalayo ngokubanzi zithathwa njengezisebenza ngakumbi xa kufikwa ekunciphiseni ukungakhululeki emzimbeni ngenxa yolungelelwaniso esele lukhankanyiwe. Ukurhoxiswa kweoyile yembewu ye-hemp kwenza ukuba i-CBD ifumaneke ngakumbi emzimbeni. Ukuba awuyondawo yeoyile yendalo ye-CBD, ungazama ukhetho lwe-Kiwi, olunencasa yobusi. Inyosi yegolide ikwabonelela ngee-capsule ze-CBD ezinamandla aphezulu (ukuya kuthi ga kwi-40 mg ngephilisi nganye) kunye neenkuni ezimnandi zobusi-ukhetho olukhulu lwemveliso yohlobo kunye nenyosi kwilogo yayo.
3. CBDPure - Umntu okungenelo
I-CBDPure yenye yezona zinto zintengiso ezibonakalayo kwintengiso. Inkampani ichaza ngokubanzi onke amanqanaba okwenza ioyile ye-CBD kwaye ineengxelo zebhu kwibhetshi nganye yemveliso.
Umbala wegolide weoyile luphawu olufanelekileyo lomgangatho wayo-oko kuthetha ukuba umntu wenze umsebenzi olungileyo ngelixa ecoca isicatshulwa kwi-chlorophyll egqithisileyo nakwizinto zokutyala.
Ioyile inephunga lomhlaba, eliqhelekileyo kwizicatshulwa ze-hemp, kodwa iyathandeka ngokumangalisayo.
Ayisiyo oyile inamandla phaya. Unokukhetha phakathi kwamandla amathathu: 100 mg, 300 mg kunye ne-600 mg. Owona mandla asezantsi anikezela nge-3.3 mg ye-CBD ngokusebenza, enokuba ilungile kwiintlungu eziphantsi kakhulu, okanye ukuba usebenzisa ioyile ye-CBD okokuqala.
I-CBDPure ithengisa ioyile epheleleyo kunye necocekileyo (iTHC-yasimahla). Inguqulelo emsulwa ingcono kwabo bafuna ukuxhamla kwi-CBD ngaphandle kwe-THC kwinkqubo yabo. Abanye abantu bafuna nje ukuphazama kwicala lokulumkisa, ngelixa abanye bengazukusebenzisa iimveliso ezigcweleyo ngenxa yokuba baphantsi kovavanyo lweziyobisi rhoqo emsebenzini.
Zine. I-NuLeaf Naturals
I-NuLeaf Naturals.I-NuLeaf Naturals
INuLeaf Naturals sele ithengisa ioyile ye-CBD yeprimiyamu ngaphezulu kweminyaka emihlanu ngoku, kwaye ngelishwa, inkampani igqibe ekubeni ingawandisi umgca wayo weemveliso.
INuLeaf ithengisa kuphela i-oyile yemveli ye-CBD-kwaye ayikho enye into.
Ukuba ujonga ukhetho olubanzi lwemveliso, sicebisa ukuba unamathele kwiRoyal CBD, kodwa ukuba ujonge ioyile epheleleyo ye-CBD eyenziwe ngokugqibeleleyo, le nkampani yenye yezona zinto zidumileyo zivelisayo kwishishini. .
INuLeaf Naturals ibonelela ngeoyile ye-CBD kubungakanani beebhotile ezintlanu:
5 ml -I-240 mg ye-CBD;
I-15 mL -725 mg we-CBD;
I-30 mL -1450 mg ye-CBD;
50 ml -2425 mg ye-CBD; kwaye
100 ml -4850 mg ye-CBD.
Amandla e-oyile akatshintshi nobungakanani bebhotile, ke yinto elungileyo kubantu abawaziyo umlinganiso wabo osebenzayo kwaye bajonge ukuhanjiswa kweenyanga.
Icala elisezantsi kuphela malunga neNuLeaf Naturals-ngaphandle komgangatho wemveliso encinci-kukuba ezi oyile zixabiso liphezulu kunezinye iimveliso ezikolu luhlu ngelixa zinikezela ngomgangatho ofanayo.
Ioyile ye-CBD yinto yendalo engenye kunee-counter-the-counter-supplements-kunye ne-panacea yanamhlanje kuluhlu olubanzi lwezinto ezixhalabisayo kwezempilo. Abanye abantu bayisebenzisela ukuphumla kunye nokuthomalalisa iingqondo zabo emva kosuku oluxineneyo, ngelixa abanye bethatha ioyile ye-CBD kwiimeko ezinganyangekiyo kubandakanya ukudumba, iintlungu kunye nomoya ongekho mhle.
I-CBD icatshulwa kwiintyatyambo zeentyatyambo ezivuthiweyo ze-cannabis emva koko yenziwe isicatshulwa esinamafutha. Inkqubo yokukhupha, kunye nezixazululo ezichaphazelekayo, zinokuchaphazela kakhulu umgangatho wokugqibela kwemveliso.
Indlela i-CBD evelisa ngayo iziphumo zayo ayikacaci kwizazinzulu. Nangona kunjalo, uninzi lweengcali ziyavuma ukuba i-CBD imodareyitha inkqubo ye-endocannabinoid (ECS), ngaphandle kokukhuthaza ngokuthe ngqo ii-cannabinoid receptors, ngendlela efanayo ne-THC.
I-THC ibophelela kwii-cannabinoid receptors kwingqondo, ilingisa iintshukumo zekhemikhali eyakhiwe ngokufanayo eveliswa yingqondo (anandamide), yiyo loo nto iziphumo zengqondo.
I-CBD, kwelinye icala, ichaphazela iindlela ezininzi kuwo wonke umzimba womntu. Ingatshintsha indlela esiba nexhala ngayo, ukudumba kunye nentlungu.
Ezona zifundo ziBalulekileyo kwi-CBD kunye nePain
Ioyile ye-CBD inezibonelelo ezininzi zempilo, kwaye unokuthiya ezimbalwa ngoku. Kuthathwa njengenye yezona zinto ziluncedo kakhulu kwi-cannabis kwisityalo se-cannabis. Makhe sibone ukuba zithini izifundo malunga nokusebenzisa ioyile ye-CBD yokulawula iintlungu.
Ukuphononongwa ngo-2008 kwezifundo esele zikho kwi-CBD ekupheliseni iintlungu ezingapheliyo kugqityiwe ukuba i-CBD yayisebenza ekulawuleni iintlungu ngaphandle kokubangela iimpendulo ezingafunekiyo.
Ngo-2007, uphando olulawulwa kabini-oluyimfama lwafumanisa ukuba i-CBD inokunceda abaguli abanentlungu ye-neuropathic.
Okokugqibela, uphononongo lwe-2016 lubonise unxibelelwano oluqinisekileyo phakathi kokusetyenziswa kwe-CBD kunye nokunciphisa ukudumba kwizigulana zamathambo. Kolu phando, abaphandi basebenzise i-CBD ngezihloko kwiigundane iintsuku ezine zilandelelana.
Uphononongo luphelile ukuba iigundane ezinikwe i-CBD zibonise amanqanaba asezantsi entlungu kunye nokudumba kwiindawo ezichaphazelekayo.
Uyisebenzisa kanjani ioyile ye-CBD kwintlungu
Ioyile epheleleyo ye-CBD ithathwa njengeyona ndlela isebenzayo kuba inezinto zonke ezifumaneka kwisityalo. Oku kubandakanya kungekuphela i-cannabinoids, bu kunye ne-terpenes kunye neeoyile ezifanelekileyo. Izifundo zifumene izicatshulwa ezipheleleyo ukuba zisebenze ngakumbi ekuphatheni iintlungu kunye nokuvuvukala kunabalingani babo be-molecule.
Ungathenga ioyile ye-CBD kwibhotile ene-dropper. Idropha ikuvumela ukuba ulinganise isixa esifanelekileyo seoyile kwaye uyidlulisele phantsi kolwimi, apho kuya kufuneka uyibambe kangangemizuzwana engama-60 ngaphambi kokuginya.
Iziphumo zeoyile ye-CBD kufuneka ize kwimizuzu engama-20, kunye nezibonelelo ezihlala iiyure ezine ukuya kwezintandathu, kuxhomekeke kumthamo wakho kunye nemetabolism.
Akukho zikhokelo zedosi ezingqongqo ekufuneka zilandelwe xa kufikwa ekusebenziseni ioyile ye-CBD kwintlungu. Kungenxa yokuba wonke umntu usabela ngokwahlukileyo kwioyile ye-CBD.
Kwabaqalayo, sicebisa ukuba umisele ubuzaza bentlungu.
Thatha isigqibo sokuba luhlobo luni lweentlungu olulawulekayo kuwe, kwaye uzame ukulilinganisela ezantsi ukuya kuthi ga ngelo xesha.
Kwiintlungu ezisezantsi, licebo elihle ukuqala nge-5-10 mg ye-CBD ngosuku. Kwiintlungu eziphakathi ukuya kweziphezulu, idosi iphakathi kwe-20-100 mg.Ukusetyenziswa ngokulula ngakumbi, unokujonga kwakhona Ukukhetha ukutya okuphezulu kwe-CBD .
Kutheni le nto usiya ezantsi kwaye ucothe?
Kungenxa yokuba abanye abantu banobuthathaka kakhulu kwimixube ye-cannabis. Kukho abantu abaxhamlayo kwiidosi eziphantsi ezihlekisayo. Ukunyuka okungaphantsi kuvumela i-dosing echanekileyo ngakumbi, eqinisekisa ukuba awuzukufumana naziphi na iziphumo ebezingalindelekanga ngaphandle kwezibonelelo zayo.
Ioyile ye-CBD okanye i-Cream ye-CBD: Yeyiphi na ekufuneka ndiyisebenzisele iintlungu?
Ukuba neentlungu emlenzeni wakho kunokukhokelela ekubeni ucinge ukuba ukusebenzisa i-CBD cream kwindawo echaphazelekayo kuya kukunika iziphumo ezingcono kunokuginya ioyile ye-CBD.
Ewe, oku akunjalo.
Sebenzisa imixholo ye-CBD kwiindawo ezibuhlungu lukhetho olulungileyo ukuba iintlungu azinzulu. Ukusebenzisa ii-CBD kwiindawo ezinobunzima kuyindlela efanelekileyo ukuba iintlungu azinzulu. Iikhrim ze-CBD zisebenza kuphela kwizakhiwo ze-anatomiki ezibekwe ukuya kwisentimitha enye phantsi kolusu.
Kwaye xa usilwa nokudumba ngokudibeneyo okanye ukukhathazeka kwesihlunu, ingxaki kusenokwenzeka ukuba inzima ngakumbi kunaleyo.
Imixholo ye-CBD ngokubanzi ifuna ukubonwa kwenkululeko kwindawo echaphazelekayo. Ukuba unesandla esivulekileyo ngeekhrim, kukho ithuba lokuba ezinye ziya kungena kulusu luye kwiimisipha zakho.
Akuthethi ukuba akufuneki usebenzise izihloko konke konke. Ngapha koko, benza ulongezo olukhulu kwioyile ye-CBD kuba basondela kwingxaki ngendlela eyahlukileyo.
Ungamisela njani ioyile ephezulu ye-CBD
Ukuba uzama imveliso entsha yempilo-ntle yakho okanye iimpawu okokuqala, ufuna ukuqiniseka ukuba ngowona mgangatho uphezulu kunokwenzeka.
Nazi iindlela zokuthenga ezibaluleke kakhulu:
Umthombo we-CBD ubaluleke kakhulu kumgangatho wemveliso yokugqibela. Izityalo zeempempe ziyi-bioaccumulators, okuthetha ukuba zifunxa yonke into kumhlaba ebityalwe kuwo-kubandakanya zombini izinto ezimbi nezintle.
Xa ukhuliswe kumhlaba ochumileyo, ngaphandle kokusebenzisa i-pesticides kunye nezinye iikhemikhali eziyityhefu, i-hemp iya kuba phezulu kwi-CBD kunye nezondlo. Iya kuba nayo ngaphandle kokungcoliseka. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ukhethe iinkampani ezenza iimveliso zazo kwi-organic hemp.
Le yeyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele xa uthenga ioyile ye-CBD yeentlungu. Potency ikuxelela ukuba ingakanani i-CBD ekhoyo kwibhotile, nakwimililitha nganye yeoyile.
Jonga iimveliso ezithengisa ioyile ye-CBD kuluhlu olubanzi lokugxila. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukukhetha olona khetho lusebenzayo, zombini ngokwempembelelo kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Nceda ukhumbule ukuba potency ephezulu ayithethi ukuba i-oyile iya kusebenza ngcono kuwe. Njengoko kuphawuliwe, abanye abantu baxhamla kwiidosi ezisezantsi, ke ukuba ibhotile ye-250 mg yenza iqhinga lentlungu yakho, akukho sidingo sokujonga ukhetho olunamandla.
Ukukhupha kuthetha ukutsala i-CBD kunye nezinye izinto ezivela kwisityalo usebenzisa uhlobo oluthile lwesinyibilikisi. Umgangatho wegolide wokwenza iimveliso ze-CBD kukukhutshwa kwe-CO2.
I-CO2 isetyenziswa njengesinyibilikisi esiguqula imeko yaso ukusuka kwigesi iye kulwelo, ukungena kwisityalo kunye nokukhupha ii-cannabinoids kuyo. Ekugqibeleni, i-CO2 iya kusasazeka, ishiye ngasemva i-oily, viscous extract.
Ezinye iindlela zokukhupha zibandakanya ioyile ye-olive okanye utywala (tinctures). Cima ioyile ye-CBD eyenziwe nge-butane, kuba esi sinyibilikisi kunzima ukusebenzisana nayo kwaye inokushiya intsalela enetyhefu emazantsi eoyile yakho xa iphethwe ngendlela engafanelekanga.
Uvavanyo lweqela lesithathu
Iinkampani ze-CBD zingathumela iisampulu zeemveliso zazo kuhlalutyo lomxholo kwiilebhu ezizimeleyo.
Ezi iilebhu zijonga amandla e-CBD kwaye zikhangele ukungcola okuqhelekileyo kwimveliso yokugqibela. Ngaphambi kokuba ioyile ye-CBD iyenze ezishelfini, inkampani kufuneka iqinisekise ukuba akukho kungangqinelani koxinzelelo lwe-CBD kunye namanqanaba okusulungeka.
Uvavanyo lomntu wesithathu kuphela kwendlela yokuqinisekisa ukuba ufumana kanye le nto uyithengayo. Uninzi lweenkampani ezaziwayo zibonisa iingxelo zebhu kwiiwebhusayithi zazo.
Apho unokuthenga ioyile ye-CBD
Kulula ukufumana ioyile ye-CBD iyathengiswa kwezi ntsuku kuba intengiso iyakhula kwaye iinkampani ezintsha ze-CBD ziyavela inyanga nenyanga. Unokufumana ioyile yakho ye-CBD kwi-intanethi okanye uyithenge kuyo enye yee-dispensaries zendawo kwimeko yakho.
Asikukhuthazi iivenkile zentloko, iivenkile zokutya okanye ezinye iivenkile ezenziwe ngezitena nodaka, njengoko zihlala zithwala iimveliso ezixabisa kakhulu ezisemgangathweni wazo ezishiya zinqweneleka.
Ukuthenga ioyile ye-CBD kwi-intanethi kukunika ukufikelela kuluhlu olubanzi lweemveliso, ukuthengisa okunomtsalane kwamaxesha onyaka kunye nezinye izinto kubathengi ababhalisiweyo
Ungaqinisekisa ngokulula ukuthembeka komthengisi wakho onokubakho ngokufunda ngokulula indlela abazenza ngayo iimveliso zabo, ujonge iZatifikethi zoHlalutyo, okanye ujonge uphononongo oluvela kwabanye abathengi kunye nokulinganiswa kwiiwebhusayithi ezinikezelwe yi-CBD.
Iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho zeoyile ye-CBD
Ukhuseleko lwakho kufuneka lube yeyona nto iphambili kuwe, ke kubalulekile ukuba uqonde umngcipheko wokuthatha ioyile ye-CBD.
Into elungileyo kukuba i-CBD yeoyile ayinaziphumo zibi. Umbutho wezeMpilo weHlabathi uyamkele njengemveliso ekhuselekileyo engabangeli ukuxhomekeka.
Eyona mpendulo ixhaphakileyo kwioyile ye-CBD yimvakalelo yokoma emlonyeni. Oku kuqhelekile kuzo zonke iimveliso ze-cannabis kunye neziphumo ezivela kwi-cannabinoids kwi-salivation. Ungayiphepha lempembelelo yecala ngokuhlala unamanzi amaninzi emva kokufaka ioyile ye-CBD.
Ukufumana isiyezi ngenxa yokwehla koxinzelelo lwegazi kuqhelekile phakathi kwabasebenzisi be-CBD. Kwiidosi eziphezulu kakhulu, i-CBD inokubangela urhudo kunye nesicaphucaphu. Kwenzeka xa uthatha okungaphezulu kunokubamba umzimba wakho, ngenxa yoko ucoca ioyile engaphezulu kwinkqubo yakho.
Ukuba nomlomo owomileyo kunokuwucutha okwethutyana umdla wakho wokutya, kodwa ezi ziphumo kufuneka zidlule ngokuhamba kwexesha.
Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho, kukho amayeza ambalwa anokusebenzisana kakubi ne-CBD.
Umzekelo, i-CBD yiarhente yokuncipha kwegazi. Ngokunciphisa uxinzelelo lwegazi, ioyile ye-CBD inokubangela amanqanaba ayingozi e-hypotension.
Ukuba uthatha nawaphi na amayeza kagqirha, kungcono udibane nogqirha ngaphambi kokuthenga nayiphi na imveliso ye-CBD.
Iingcinga zokugqibela zokuSebenzisa ioyile ye-CBD yeNtlungu
Ioyile ye-CBD iza nezibonelelo ezininzi zempilo, kubandakanya ukukhululeka kwiintlobo ezahlukeneyo kunye namanqanaba entlungu. Isabelo sengonyama salezi zibonelelo zibangelwa kukusebenzisana kwe-CBD kunye nenkqubo yethu ye-endocannabinoid.
Ngokutshintsha ukuhanjiswa kwentlungu ukusuka kwimithambo-luvo uye kwingqondo, i-CBD inokunceda abantu balawule iintlungu kwaye baphucule umgangatho wabo wobomi ngendlela ekhuselekileyo nendalo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukuba usebenzise kuphela iimveliso ezikumgangatho ophezulu ezivela kubavelisi abaziwayo. Kungoko kuphela apho uya kuthi ube nakho ukufumana okuninzi kwiipropathi ze-CBD ze-analgesic.
Siyathemba ukuba esi sikhokelo sikuncedile ufumane ukuqonda okungcono Iimveliso ze-CBD.Zive ukhululekile ukusebenzisa iingcebiso zethu kwaye usazise ukuba ioyile ye-CBD ikuncede njani kwintlungu yakho!
I-‘Desierto ’kaJonás Cuarón sisiQhwanyelo Sokuphefumla Esintlango
'Umthetho kunye noMyalelo: I-SVU' kwakhona 17 × 6: Ulawulo lweSiphithiphithi esiNxulumene
I-5 yeeNdawo eziBonakalayo ezingabonakaliyo kunye neKhithi yaMakhaya yokuLungisa amazinyo (Eyona ndlela ingabizi kakhulu kwi-Braces)
'Incwadi yeeShadows: UBlair Witch 2' Ungcono kunokuba ifumane nayiphi na iMboleko
uyeke nini ukunceda umntu
ungazi njani ukuba uyinyanga yakho
yeyiphi i-interstellar esekwe kuyo
I-clinton inyathelo lehlabathi vs isiseko se-clinton
ndiyaxolisa ngokuniphazamisa ngamaxesha okubonisa nyc
ingqiqo yokujonga kwakhona i-movie